माओवादीले ३३ विभागको नेतृत्व टुंग्यायो:महरालाई दुई बिभाग(कस्ले कुन जिम्मेवारी पायो) - sajhamail - No 1 news portal from nepal. This is online site of sajha patrika weekly.
प्रकाशित मिति : October 21, 2021
काठमाडौ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीका ३३ विभाग र १ प्रतिष्ठानको नेतृत्व टुंगो लगाएको छ । स्थायी कमिटीको बिहीबारको बैठकले विभाग र प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयन गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
प्रवक्तासमेत रहेका कृष्णबहादुर महरालाई दुई विभागको प्रमुख बनाइएको छ । महरालाई प्रचार तथा प्रकाशन विभाग र राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको प्रमुख बनाइएको छ ।
त्यस्तै, पार्टी स्कुल विभागको नेतृत्व गिरिराजमणि पोखरेललाई दिइएको छ । उक्त विभागको नेतृत्वमा यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए । दाहाललाई पार्टी स्कुल विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको महराले बताए ।
पार्टी स्कुल विभाग : गिरिराजमणि पोखरेल
माओवादी केन्द्रमा जिम्मेवारी परिवर्तन : कुन नेताले कहाँ जिम्मेवारी पाए ? (सूचीसहित)
केपिको सरकार खतरामा ,आज माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्दै